Sida loogu gudbiyo ogeysiisyada ka soo baxa mobilada mid kale | Androidsis
Sida loogu gudbiyo dhamaan ogeysiisyada fariimaha, wicitaanada iyo digniinta hal mobiil ilaa mid kale SMS ama emayl
Kama daali doonno inaan dhahno Android waa bahal marka ay timaado khibrad u habeynta. Waxaan leenahay mid cusub tanina waa sida loogu gudbiyo dhammaan ogeysiisyada fariimaha, wicitaanada iyo digniinta hal mobiil ilaa mid kale SMS ama emayl ahaan.
Taasi waa, haddii aad badanaa haysato laba taleefan gacmeed, sida ku dhacda xirfadlayaal badan oo leh mid shaqsi iyo mid ganacsi, waxaad awoodi doontaa inaad hesho dhammaan ogeysiisyada midna kan kale isla markiiba. Sidan ayaad ku keydin doontaa inaad uga tagto mid ka mid ah khaanadda miiska xafiiska oo qaado mid kale oo wax kastoo muhiim ka ah mobilkaaga kale la ururin doono, xiiso leh, sax? U tag.
1 Kuwa haysta laba moobil
2 Fariin Dheeraad ah oo horay u qaabeysan
3 Shaandheeyaha erayada qaaska ah
Kuwa haysta laba moobil
Fariinta gudbiyaha waa barnaamijka noo oggolaan doona inaan helno shaqadan gaarka ah taleefanka gacanta. Waxaan u leenahay maxaa yeelay marar badan, markaan qaadaneyno labo taleefan gacmeed, mararka qaar waan waayi karnaa ogeysiisyada mid iyo tan kale, marka barnaamijkan waxaan si otomaatig ah ugu heli doonaa dhammaan ogeysiisyada wicitaanada soo socda, SMS, digniinta iyo noocyada kale ee fariimaha lambarka taleefanka kale. taleefan ama emayl.
Si loogu gudbiyo ogeysiisyada moobaylka kale midkeena ama lambar taleefan kale, barnaamijku wuxuu ubaahan yahay in si sax ah loo qaabeeyo si aad u hawlgeliso shaqadan. Barnaamijku wuxuu ina tusayaa shaashado taxane ah oo noo sheegaya wax walba oo ay tahay inaan sameyno, si ilbiriqsiyo gudahood aan ugu shaqeyno.
Dabcan, waa inaad isku xir xeerarka marka hore iyo nooca fariimaha iyo ogeysiinta aan rabno inaan helno sida SMS ama emayl ahaan. Waqtigan xaadirka ah, Fariinta Fariinta kaliya waxay taageertaa ama taageertaa fariimaha SMS, MMS iyo wicitaanada taleefanka. Marka haddii aad rabto inaad ka hesho farriimaha WhatsApp taleefan kale xilligan ma ogola.
Fariin Dheeraad ah oo horay u qaabeysan
Mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee barnaamijkani waa inay noo oggolaato qeexaan xiriirada aan dooneyno inaan ka helno ogeysiisyada taleefankeena. Digniintaan waxaa loo diri karaa lambarro iyo emayllo fara badan. Taasi waa, waan u qaabeyn karnaa si aysan u aheyn kaliya hal mobiil oo helaya ogeysiisyada, laakiin inay jiraan dhowr. Habkaani wuxuu furayaa fursado iyo xalal badan.
Dabcan, haddii aan isticmaalno dariiqa SMS-ka, markasta oo digniin la diro, waxaa lagu dalacayaa sida ku heshiiyeen qorshahaaga xogta shirkadaada. Waa inaad hubisaa in haddii aad isticmaasho dariiqan aad hayso qorshe SMS oo aan xad lahayn si aan bil kasta lacag xad dhaaf ahi kuugu dhicin. Waxaa ugufiican in boostada la qaato si lacagta noocan ah loo badbaadiyo.
Xaqiiqdii, emaylladaas waan awoodnaa isticmaal koontada google inaan la xiriirnay taleefanka haddii aan rabno inaan u adeegsanno Gmail ahaan. Wax walba way fududahay in la sameeyo.
Shaandheeyaha erayada qaaska ah
Mid kale oo ka mid ah wanaagga Fariinta Forward waa inaan shaandhayno ama digniinta shaashadda si loo caddeeyo eray ama dhowr ka mid ah. Kaliya kuwaan ayaa la soo diri doonaa, markaa hadaad rabto inaad hesho wicitaanka hooyadaa, waad sameyn kartaa adigoon kuwa kale ku dhibsan. Ama xitaa kuwa qaraabadaada ah ee aad fahanto waa kuwa aad rabto inaad kaqeyb gasho.
Fariinta Forward waa barnaamij freemium ah oo haa waxay noo ogolaaneysaa inaan sameyno micropayment si loo baabi'iyo xayeysiinta aan ku arki doonno meelaha qaar ee dalabka.
Si aad u soo dejiso barnaamijka, maadaama uusan hadda ku jirin Google Play Store, waa inaad rakibataa Shaybaarada XDA oo raadi:
Shaybaarka XDA si uu u soo dejiyo Fariinta Forward - Download
Xiiso leh abka si loogu gudbiyo dhammaan ogeysiisyada ka imanaya hal taleefan illaa mid kale si otomaatig ah taasna waxay uga imaan kartaa luul isticmaalayaasha qaarkood oo badanaa laba la socda maalin kasta. In kasta oo ay iyaduna u sii harsan tahay hawlo kale oo hubaal adiga kugu dhici doona. Waanu kaa tagnay leh barnaamijkan si loo habeeyo ogeysiisyada sida aad rabto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loogu gudbiyo dhamaan ogeysiisyada fariimaha, wicitaanada iyo digniinta hal mobiil ilaa mid kale SMS ama emayl
Isku soo duubista fiidiyowga ee Ciyaaraha ah si aanu kuugu cidhiidhin guriga iyo codsiyada laga yaabo inay lagama maarmaan u ahaadaan xabsi buuxa
Gameloft wuxuu u dabaaldegaa sannad-guuradii 20aad: iskuday 30 ciyaarood oo bilaash ah Gameloft Classics